I-KLL ngombala otyheli weplastikhi, isinqe esimnyama, ityhubhu ye-SS, iilebhile kumacala omabini eqokobhe, ucinezelo lwe-elektroniki, kulula ukuyiphatha, ikhuselekile ukusebenza, inokuphinda izaliswe ngebhotile yegesi ye-butane, esetyenziselwa ukulungiswa kokutya, ukufudumeza ukungunda, ukutshabalalisa, i-barbecue, inkampu yangaphandle, i-welding njl njl.
I-KLL-Incwadana yokuCoca iTotshi-7003D
I-KLL ngombala otyheli oguqukayo, umzimba wobhedu, ucinezelo lwencwadi, yenzelwe ukusetyenziswa ngaphandle, nceda uqiniseke ukuba ungayisebenzisi ngaphakathi kwe-buliding, izithuthi, ii-ortens, kuba kukho ingozi yokufa ngenxa yokuphefumla ngenxa yecarbon dioxide posisoning okanye i-oxygen . Nokuba uyisebenzisa ezindlini zethu kwiindawo ezimxinwa, qiniseka ukuba kukho umoya owaneleyo, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yokuCoca i-Torch-7005D
I-KLL ngombala otyheli oguqukayo, ityhubhu ye-SS, ipayipi yokugoba i-aluminium, ucinezelo olwenziweyo, ukukhanya okulula, ilangatye elilungelelanisiweyo lokusebenzisa, ukutshisa ubushushu kutshabalalisa umphelo weseli yesityalo, ikakhulu kusetyenziswa ukugoba imibhobho ukubumba, ngaphandle, ukumisa imibhobho neminye imisebenzi yemibhobho, ukutywina I-PVC kunye nokunxibelelana kwangaphambi kokuthengiswa, ukutshisa ii-BBQ kunye nemililo njl. Njl. Sebenzisa i-easliy efumanekayo isilinda segesi njengomthombo wombane, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yokuCoca i-Torch-7006D
Vala umbala weqhina elinokuhlengahlengiswa ngombala, ityhubhu enkulu ye-SS enelangatye ukuseta iCartridge yegesi, ucinezelo olwenziweyo, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, uyilo lwesiphatho se-ergonomic, ulunge nokusingqongileyo, akukho khemikhali ziyingozi, zingenantambo; ilight, adjustable flame economical to use, blast blast timers plant plant, most using for bending pipe to shape, deforsting imibhobho kunye neminye imisebenzi imibhobho, ukutywina PVC kunye pre-soldered uxhulumaniso, ukubasa BBQ kunye nemililo njl sebenzisa easliy ukufumana butane irhasi isilinda njengomthombo wamafutha, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yokuCoca i-Torch-7008D
Umbala oMnyama oQinisekisiweyo weQhosha, ityhubhu enkulu ye-SS, ucinezelo olwenziweyo, ukutshixa okungafaniyo kwesilinda ukuthintela ukuvuza, uyilo lwesiphatho se-ergonomic, ukujongana nokusingqongileyo, akukho khemikhali ziyingozi, zingenantambo; ilight, adjustable flame economical to use, blast blast timers plant plant, most using for bending pipe to shape, deforsting imibhobho kunye neminye imisebenzi imibhobho, ukutywina PVC kunye pre-soldered uxhulumaniso, ukubasa BBQ kunye nemililo njl sebenzisa easliy ukufumana butane irhasi isilinda njengomthombo wamafutha, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yokuCoca iTotshi-7009D
Umbala oMnyama oQinisekisiweyo weQhosha, ityhubhu enkulu ye-SS enelangatye ukuseta iCartridge yegesi, ucinezelo olwenziweyo, ukuvala i-cyliner eyodwa ukunqanda ukuvuza, uyilo lwe-ergonomic yokubamba, ulungelelene nokusingqongileyo, akukho khemikhali ziyingozi, zingenantambo; ilight, adjustable flame economical to use, blast blast timers plant plant, most using for bending pipe to shape, deforsting imibhobho kunye neminye imisebenzi imibhobho, ukutywina PVC kunye pre-soldered uxhulumaniso, ukubasa BBQ kunye nemililo njl sebenzisa easliy ukufumana butane irhasi isilinda njengomthombo wamafutha, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yemigaqo yokuCoca iTotshi-7011D
I-KLL ngombala otyheli ojija uhlengahlengisiweyo, ityhubhu yobhedu ephindwe kabini enamawele enkanyamba ngaphakathi, ucinezelo olwenziweyo, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, Sebenzisa imikhono yokunciphisa ubushushu kunye nezihlanganisi zazo. Faka isicelo se-microwelding inbolving copper- welding, i-silver- welding, i-tin-welding kunye ne-ornament processing. Ukufakela, ukuwelda, unyango lwe -faceface kunye nokufudumeza kwendawo kumasifundisane, igaraji kunye nelebhu. njl. sebenzisa isilili yebutane efumanekayo njengesixhobo sokufumana umbane, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yemigaqo yokuCoca iTotshi-7015D
Umbala oBomvu ujija elinokuhlengahlengiswa, ityhubhu yobhedu, ucinezelo olwenziweyo, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, uyilo lwesiphatho se-ergonomic, ulungelelene nokusingqongileyo, akukho khemikhali ziyingozi, zingenantambo; ilight, adjustable flame economical to use, blast blast timers plant plant, most using for welding pipe air conditioning, deforsting imibhobho kunye neminye imisebenzi yokufaka imibhobho, ukutywina i-PVC kunye nokunxibelelana kwangaphambili kwe-soldered, ukutshisa ii-BBQ kunye nemililo njl. isilinda njengomthombo wamafutha, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL-Incwadana yemigaqo yokuCoca iTotshi-7016D
I-KLL ngombala otyheli oguqukayo, ityhubhu yobhedu, ityhubhu yokugoba ye-SS, ucinezelo lwencwadi, ukuvala isilinda okhethekileyo ukuthintela ukuvuza, Sebenzisa imikhono yokunciphisa ubushushu kunye nezihlanganisi zazo. Faka isicelo sokufaka i-microwelding inbolving-welding, i-silver-welding, i-tin-welding kunye ne-ornament processing. Ukufakela, ukuwelda, unyango lwe -faceface kunye nokufudumeza kwendawo kumasifundisane, igaraji kunye nelebhu. njl. sebenzisa isilili yebutane efumanekayo njengesixhobo sokufumana umbane, iziko elisebenza ngedangatye kwiqondo lobushushu ukuya kuthi ga kwi-1300 degrees.
I-KLL ngombala otyheli weplastikhi, iqokobhe elimnyama kunye ne-trigger, ityhubhu ye-SS ene-ceramic ngaphakathi, ucinezelo lwe-elektroniki, kulula ukuyiphatha, ikhuselekile ukusebenza, inokuphinda izaliswe ngebhotile yegasi ye-butane, esetyenziselwa ukulungiswa kokutya, ukufudumeza umngundo, ukufafaza ubushushu, i-barbecue , inkampu yangaphandle, i-welding njl.
I-KLL-Piezo Ingition Gas Itotshi-8802D
Umzimba weZinc, ukugquma ngombala omthubi, iqhina elimnyama kunye ne-trigger, ityhubhu ye-SS ene-ceramic ngaphakathi, iilebhile kumacala omabini egobolondo, ucinezelo lwe-elektroniki, ekulula ukuwuthwala, okhuselekileyo ukusebenza, unokuphinda uzaliswe ngecartridge yegesi yebutane, esetyenziselwa ikakhulu Ukulungiswa kokutya, ukufudumeza umngundo, ukufafaza ibherbheyi, inkampu yangaphandle, iwelding, njl njl.